यो कथा, बाटामा कार्पेटको भारी बोग्दै, बेच्दै हिँडेका एक दाजुको हो । नाम सोध्दा ‘जिउ पाले, धन संगाले’ भन्ने उनीले उद्यमी नेपालको टिमसँग आफ्नो जीवन र व्यवसायको बारेमा केही कुराहरू बताएका छन् ।
हेर्दा भखर चालिस जस्ता देखिने ५५ वर्षिय धनीराम सापकोटाको घर मध्ये-पश्चिम नेपालमा पर्दो रहेछ । उनको तिन जना छोराहरू र एक जना छोरी छन् र उनी दुई नातीहरूका हजुरबुबा पनि हुन् । यत्रो उमेर पुग्दा पनि उनी कार्पेटको भारी बोकेर काठमाडौँ सहरको हरेक कुना कुना बेच्न पुग्छन् ।
उनले यो व्यवसायमा लागेको बिस वर्ष भइसकेको कुरा बताए । उनले भने, “म काठमाडौँ आउनु अगाडी आफ्नै गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्थें । मेरो एउटा सानो किराना पसल पनि थियो । सङ्कटकालको बेलामा घरमा बस्ने अवस्था नभएर गाउँ छाडी सहर पसेको हुँ । यसै क्रममा कामको खोजीमा मेरो एकजना साथीको मार्फतबाट यो कामको बारेमा थाहा पाएर यसैमा लागेको ।”
उनीले भने यो व्यसायमा मुख्य चाहिने नै बोली हो । मार्केटिंग गर्न जानियो भने राम्ररी ग्राहक बनाउन सकिन्छ । उनले यो व्यवसाय गर्न साहुकोबाट कार्पेटहरू लिएर आउँछन् र ब्यान, बेलुका कार्पेट बोक्दै बेच्न हिद्छन् । उनी जस्तै अरू ४२ बयालिसजना छन्, जो दिनदिनै कार्पेट बेच्न हिँड्ने गर्छन् । उनको भनाई अनुसार उनी पहाड बाहेक सबै ठाउँमा कार्पेटहरू बेच्न पुग्छन् । यसरी बेचेर दिनको कहिले पाँच सय त कहिले पाँच हजार सम्मको आम्दानी हुने कुरा उनले बताए ।
कृषक भएको नाताले उनी धान बाली रोप्ने समयमा आफ्नो गाउँ फर्किन्छन् र सबै रोपाई सिध्याएर फेरी काठमाडौँ आइ कार्पेट बेच्ने काममा नै लाग्छन् । यसरी नै व्यवसाय गरेर उनले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई राम्रो उच्च पदकको शिक्षा पनि दिन सफल भएका छन् ।
यसरी हेर्दा साधारण देख्ने उनीले आफ्नो पुर्ख्यौली काम पनि छोडेका छैनन् र खाली भएको समयमा कार्पेट बेचेर आफूमा भएको ऊर्जा र समयको पनि राम्रो सदुपयोग गर्दै आएका छन् । उनी धन सम्पत्ति नभएका व्यक्ति होइनन् तर पनि मिहिनेत गर्नमा विश्वास गर्ने उनी, आफ्ना सन्तान र अहिलेका युवा पुस्ताका लागि एक बुलन्द उदाहरण बन्न सक्छन ।
कपाल काटेर पनि मनग्य आम्दानी !
उद्यमी नेपालको टीमले हजाम व्यवसाय गर्दै गरेका...
पाटन ढोकाको दिया हस्तकला पसल जानु भाछ ?...
दीपिका महर्जन एक युवा व्यवसायी हुन् ।...
चाहे जुनसुकै मन्दिरमा जाँदा किन नहोस् सधैजसो...
'दरबार हत्याकाण्ड नभाको भए मेरो ऋण कहिले उत्रिने...
१२ वर्ष अगाडी १ लाखको ऋण शिरमा...